Chelmo - ၂၀၁၇ အတွက် ကံတက်စေမယ့် ရာသီခွင်အလိုက် စကားလုံးတွေ
၂၀၁၇ အတွက် ကံတက်စေမယ့် ရာသီခွင်အလိုက် စကားလုံးတွေ
ကိုယ်ပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာ ကံ၊ကံ၏အကျိုးကို ခံစားရမှာပါ။ ရာသီခွင်အလိုက်ပြောသင့်တဲ့စကားတွေကတော့ ...
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေက အောင်မြင်မှုကို ရရှိစေမှာပါ။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကားကို ပြောနိုင်ဖို့က အဓိကပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ပေးလို့ပါ။ စသည်ဖြင့်မရှက်မကြောက် ပြောနိုင်ရမှာပါ။
၀၂. ဓနုရာသီ (Sagittarius) : နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အတွင်း
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ပေါများလာမည့်နှစ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရအောင်၊ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့ စသည်ဖြင့် ဒီစကားတွေကို မမေ့ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်နေရင်း ကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကို သိလာမှာပါ။
၀၃. ပြိဿရာသီ (Taurus) : ဧပြီ ၂၁ ရက်မှ မေ ၂၀ ရက်အတွင်း
အခြားသူတွေထက် အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမယ့် နှစ်ဖြစ်နေတာကြောင့်၊ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေနည်းတူ လှုပ်ရှားပြန်တော့လည်း ကိုယ်နဲ့မကိုက်ဖြစ်နေတော့ စိတ်ဆင်းရဲရမှာပါ။ ဒီတော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပေးပါ။
တိုးတက်မှုတွေ ရပ်တန့်နေတတ်ပါတယ်။ အတွေးတွေကလည်း အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်သွယ်ရတာကို ကြောက်နေတတ်ပါတယ်။ ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။ အချိန်တန်ရင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုမင်းယုံပါ လို့ အားပေးစကားကို ပြောပေးပါ။
အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ပြည့်နေမယ့် နှစ်ဖြစ်မှာပါ။ ဒီအတွက် ဘာကိုမှ ကြောက်မနေပဲ လုပ်သင့်တာတွေကိုလုပ်ကြည့်ပါ။ သင်ပေးပါ၊ သိချင်တယ် ဆိုတဲ့ စကား၂ခွန်းကို ခေါင်းထဲထည့်ထားပါ။
၀၆. မေထုန်ရာသီ (Gemini) : မေ ၂၁ ရက်မှ ဇွန် ၂၀ ရက်အတွင်း
ဘာလုပ်လုပ်အောင်မြင်မယ့် အခြေအနေကို ရောက်လို့နေပါပြီ။ ပျော်လိုက်တာ၊ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေကို ပါးစပ်ကနေ ပြောကြည့်ပါ။ ပိုပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၀၇. ကုမ်ရာသီ (Aquarius) : ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်အတွင်း
လမ်းသစ်တွေကို မြင်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်တွေကို စွန့်စားပြီးလုပ်ကြည့်ပါက အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမှာပါ။ မဖြစ်နိုင်တာမရှိ၊ အားလုံး OK ဆိုတဲ့စကားတွေကို ပြောဖြစ်အောင်ပြောပါ။
၀၈. တူရာသီ (Libra) : စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေမယ့် နှစ်ပါ။ လုပ်သမျှ ကိစ္စတွေက အကောင်းဘက်ကို ချည်းရောက်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် လုပ်ကြည့်ရအောင်၊ ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့စကားလေးတွေကို ပြောကြည့်ပါ။
၀၉. မိန်ရာသီ (Pisces) : ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်း
ပြသာနာတွေများမယ့်နှစ်ဖြစ်ပင်မယ့်လည်း ဘာမှ အားမငယ်ပါနဲ့။လုပ်သင့်တာတွေကို ဆက်သာလုပ်ပါ။ ကူညီမယ့်သူ ပေါ်လာမယ် လို့ ရွတ်ကြည့်ပါ။
၁၀. ဗိစ္ဆာရာသီ (Scorpis): အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်အတွင်း
အမှောင်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့် ခဏလောက်သည်းခံလောက်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ကိစ္စမရှိဘူး အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ ပြောကြည့်ပါ။
၁၁. ကန်ရာသီ (Virgo) : သြဂုတ် ၂၂ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်အတွင်း
အားလုံး အဆင်ပြေမယ့် နှစ်ပါ။ ဒါပင်မယ့်လည်း လိုချင်စိတ်တွေက မပြီးပြတ်နိုင်တော့ ဆန္ဒတွေက မပြည့်ဝသလို ခံစားနေရမှာပါ။ ဒီအတွက် ပြသာနာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ငါ့မှာ ပြည့်စုံနေပါတယ်လို့ ပြောကြည့်ပါ။
၁၂. မကာရရာသီ (Capricorn) : ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အတွင်း
တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရမယ့်အချိန်၊ လူတွေက အားထားကြမယ့်အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဘာကိုမှ မကြောက်ပါနဲ့။ ငါလုပ်နိုင်တယ် လို့ ပြောကြည့်လိုက်ပါ။